बिजेपीले बनायो अनौठो रेकर्ड, जिएसटीपछि पनि जित्ने विश्वकै पहिलो पार्टी ! Bizshala -
बिजेपीले बनायो अनौठो रेकर्ड, जिएसटीपछि पनि जित्ने विश्वकै पहिलो पार्टी !
काठमाण्डौ । भारतको लोकसभा चुनावको हालसम्मको अवस्था हेर्दा भारतीय जनता पार्टी एक्लैले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने अवस्था बन्दै गएको छ । लोकसभाको ५४२ सीटमा भाजपा सम्मिलिन एनडिए गठबन्धन ३४३ सीटमा अगाडि छ भने भाजपा ३०० सिटमा अगाडि छ । यो रुझान जितमा परिणत भयो भने विजेपीको लागि यो निकै ठूलो जित हुने भारतीय संचारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
कर कानूनका एक जानकारलाई उद्धृत गर्दै इकोनोमिक टाइम्सले लेखेअनुसार विश्वमै यस्तो सायद पहिलोपटक भयो, जहाँ जिएसटी लागू गर्ने सरकारलाई नै जनताले शानदार मतसहित दोश्रोपटक सत्तामा पुर्याइदिए, अझ मजबुत बनाएर । ती जानकार अनुसार जिएसटी लागू गर्दै गर्दा मोदी सरकारले महंगी नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दियो र उद्योगहरुको मागप्रति सक्रियतापूर्वक काम गर्यो ।
अब बन्ने सरकारले सेवा क्षेत्रका लागि एक अनुकुल वातावरण बनाउने भारतका अर्थविदहरुको अनुमान छ । किनभने सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थाका लागि निकै ठूलो तागतको क्षेत्र हो ।